Ilay Meksikana Miguel “Piojo” Herrera, Mpanazatra Manana Ny Angesony Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2014 14:07 GMT
Baoritra misy sarin'i Miguel “Piojo” Herrera mijery lalao hatreny amin'ny dabilio. Saripikan'i Débora Poo Soto, zo voatokana avy amin'ny Demotix (13 Jona 2014).
Tamin'ny 24 Jona 2014, resin'ny ekipam-pirenena Meksikana tamin'ny 3-1 i Kroasia tao Recife nandritra ny lalao iray tamin'ny fiadiana ny amboara manerantany FIFA Brezila. Mifanohitra tamin'ny lalao teo aloha izay ny mpiandry harato Guillermo “Memo” Ochoa no nitodihan'ny maro, dia betsaka amin'ny fihetseham-po no nifantoka tamin'ny fikirizana fampiainan'ny mpanazatra Miguel “Piojo” Herrera ny lalao (piojo no dikan'ny parasy amin'ny teny espaniola).
Nizara ity sary ity ao amin'ny Twitter ny kaonty fanatanjahantenan'ny USA Today:
Ny fihorahan'i Miguel Herrera no mahafinaritra indrindra
Ny zoro fanatanjahantena ao amin'ny The Guardian dia mametraka an'i Herrera ho olo-maherin'ny Mondialy vaovao:
Mpanazatra Meksikana Miguel Herrera: olo-mahery vaovaon'ny Mondialy amin'ny aterineto
Tahaka izany ihany koa ny habaka fanatanjahantena TiempoReal mamaritra ny lazan'i Herrera tahaka izao:
Nandritra ny Mondialy, nanao izay nampalaza ny “hadalany” manerana izao tontolo izao noho ny fitiavany fatratra izay iainany isaky ny misy lalao ataon'i TRI i “Piojo”, rehefa nahafaty ny baolina faharoa tamin'ny fandresena an'i Kroasia izy dia nipoaka niaraka tamin'i Memo Ochoa satria voafehy ihany ny tolotra (pasy).
Tri, fanafohezana ny Tricolor (lokotelo), no anarana omen'ny mpanohana ny ekipany noho ny loko telo soratra isaloran'izy ireo izay mitovy amin'ny lokon'ny sainam-pireneny. Ny gazety El País nanondro an'i Herrera ho lakilen'ny fandresen'i Meksika:
Nadabok'i Meksika tamim-pahefana (3-1) i Kroasia. Nisy fahasahiana tao amin'i Miguel Piojo Herrera tamin'ny nisafidianany mpanafika roa mialoha ny fizaram-potoana faharoa, ary dia nahazo valisoa ny finoany. Ady sahala dia efa ampy hiakaran'ny ekipa meksikana amin'ny dingana manaraka, nefa raha tokony hanamafy ny fiarovana sy hiandry any aoriana, dia nobaikoan'i Herrera ny olony hanafika araka izay tratra. Tafiditr'i Márquez tamin'ny lohany ny baolina voalohany rehefa nihoatra ny tilikambo Kroasiana, asa izay novitain'i Guardado sy Javier Chicharito Hernández, vahiny niditra tamin'ny minitra farany.
Fandresen'ny fanatanjahantena iny izay natao hialana amin'ny fifantohana be loatra amin'i fiteny mankahala sy fanompana ny pelaka nataon'ny mpanohana Meksikana teny an-kianja rehefa milalao ny Tri. El Zappo, avy amin'ny habaka Homzzaping nampafantatra fa tsy hisy ny fanasaziana ireny fomba fiteny ireny:
Noho ny tsy fiheverana azy ho “fanompana ao anaty tranga manokana”, dia tsy hanasazy ny Federasiona Meksikana Baolina Fandaka (Femexfut) amin'ny hiaka hoe “makorelina” fampiasan'ny mpanohana nandritra ny lalao taloha ny FIFA.
Raha mbola mijery ilay antso voalaza, dia nanampy i El Zappo:
Nanomboka ny famotorana rehefa navoitran'ny FARE, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miady amin'ny endrika fanavakavahana rehetra amin'ny baolina fandaka, fa ompa hankahalana pelaka ilay fomba fiteny. Taorian'izany dia nanatevin-daharana ny fitakiana ihany koa ny Vaomieram-Pirenena Misoroka ny Fanavakavahana (Conapred) tamin'ny filazana fa fiteny faniratsirana ny voambolana “makorelina”.
Raha iverenana ny resaka lalao dia hifanandrina amin'i Holandy ao amin'ny kianja Castelão ao Fortaleza i Meksika amin'ny alahady 29 Jona 2014, izay mankany amin'ny ampahaefa-dalana. Sambany hatramin'ny 2002 ny ekipam-pirenena Meksikana no tafavoaka tamin'ny dingana fanintsanana mandritra ny fiadiana ny amboara manerantany rehefa nahazo isa fito amin'ny sivy nandritra ny lalao.
5 andro izayEkoatora